Mudullood oo 4 arrin ka dalbaday DFS - Caasimada Online
Home Warar Mudullood oo 4 arrin ka dalbaday DFS
Mudullood oo 4 arrin ka dalbaday DFS
Waxaan marna la ogoleen in dalka uu ku soo noqdo burbur iyo barakac balse waxaa loo baahan yahay in Madaxweeyne Xassan uu siiyo awooda gudoomiyaha Duqa cusub ee loo magacaabay gobolka Banaadir,awood oo ah in uu u madaxbanaado awooda howlgelinta
Boliska gobolka Banaadir iyo hogaan-kooda .
Nabadsugida gobolka Banaadir iyo madaxdooda.
Dhisida golaha degaanka gobolka Banaadir.
Shaqaalaha Cashuur ururinta gobolka Banaadir .
Daqliga gobolka Banaadir waxaa quman in dib loogu noqdo sabbabta oo ah 15% oo dowlada dhexe gobolka ka qaataa kuma fila gobolka nabadgelyadiisa iyo baahida u qidmeeynta shacabka ku dhaqan gobolka iyda oo la ogyahay in daqliga dowlada ugu weeyn uu yahay midka Dekeda iyo Madaarka Muqdisho uu leeyahay,daqliga canshuuraha iyo kuwa laga qaado dadweeynaha gobolka Banaadir waa in uu gobolka dib ugu soo noqdaa.
Gobolka Banaadir iyo dowlada dhexe ee federaalka waa in uu u dhaxeeya xuduud uusan midba midka kale ku xadgudbi karin ,wasiirka gudaha iyo xildhibaanada ku wareegaha gobolka waxaa quman in gobolada aay u dhasheen soo abaabulaan kana soo dhaadhiciyaan in dowlada federaalka tahay dowlad dhexe oo la wada wadaago,sida oo kale taliyaha Boliska waa in uu gobolada dalka ka soo dhisaa ciidan Boliis maaha in uu booqdo degmooyinka gobolka Banaadir,Duqa & Gudoomiyaha gobolka Bannadir waa in yeesha awooda iyo go”aanka waxwalba oo gobolka ka horyimaada sida soocelibta nabada iyo wadanoolaanshaha shacabka degen gobolka,gudoomiyaasha degmooyinka gobolka waa in la la xisaabtamaa cidii wax ka qaban weeyda degmada aay xukunto waa in talaabo laga qaadaa,degmo walbaa waa in loo dhameeystiraa waxii aay ku shaqo geli laheeyd,awooda dowlada waa in shacabka gaartaa.
Gobolka Banadir waa in loo qeeybiyaa 4 degmo deris wanaag sida degmo xeebeedyada
2.D.Xamar jab jab.
Intaa degmo waa degmooyinka dhexe
Waa degmooyinka koonfureed halka oo mudan in aay noqdaan degodiriseed
Degmooyinka waqooyi sida
Degmooyinkaa waa in aay ka muuqdaan kanna howlgalaan saldhigii boliiska iyo xarumihii degmada iyo maxkamadihii madaniga ee 4tii dego ee walba,awooda dowladnimo waa tan shacabka waxaa quman in shacabka awooda la siiyo dowladana damiin ka noqoto amiga iyo fududeeynta howlmaalmeedka degmada iyo gobolka.
Haddii aanan la xasilin gobolada shabeelada Dhexe iyo midka shabeelada hoose Muqdisho nabadeeda waa mid marwalba qalqal gali kara,sidaasi darteet waxaan leenahay labada shabeele waa in culeeyska la saaraa si amiga Muqdisho loo kobciyo waxna looga qabto,waa in uu jiraa xiriir gudoomiyayaasha goboladaa xaga isweeydaarsida wararka iyo isku gudbinta xogta al.shabbab.